Akụkọ - Ọnụ Ahịa Artificial Grass
1. Ọnụ Ahịa Artificial Grass
Ngwa dị iche iche nwere ihe dị iche iche achọrọ maka nkọwa, yana nkọwa dị iche iche pụtara ọnụ dị iche iche. Nkọwa ndị bụ isi bụ ihe, ikpo ikpo, dtex, na stitch density.
Isi Ihe Ndị Ga - emetụta Efu Elu Artificial:
Ọtụtụ ihe na - arụkọ ọrụ ọnụ iji chọpụta ọnụahịa ahịhịa. Akụrụngwa, ịdị arọ ihu (Kpebisiri ike site na Pile elu, Dtex, na Stitch Density) na ịkwado bụ isi ihe atọ. Iwu ibu ga-emetụtakwa mmepụta mmepụta.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ihe maka ahịhịa egwuregwu dị iche na ihe eji eji ahịhịa eme ihe. Ejiri ha mee ihe dị iche iche: ahịhịa egwuregwu na-elekwasị anya na mmegharị arụmọrụ, nchedo ndị na-egwu egwu, na mgbochi-iyi; Ọ bụ ezie na ahịhịa na-elebara anya na anya (Dị ka ezigbo ahịhịa, ma ọ bụ nke ka mma) na-eguzogide UV, na nchekwa. E wezụga nke ahụ,
Ikpokọta elu, Dtex, na Stitch Density na-arụkọ ọrụ ọnụ iji chọpụta ịdị arọ ihu. Ibu ihu bụ ihe dị mkpa na-emetụta arụmọrụ na ọnụ ahịa artificial. Ihe kpatara ya doro anya: ibu ihu dị arọ pụtara ihe ndị ọzọ ma rụpụta ụgwọ dị elu.
Nkwado ndị a na-ahụkarị bụ nkwado SBR na polyurethane (PU) na-akwado ya. Ngwunye Polyurethane ka mma mana yana ọnụahịa dị elu karịa (ihe dị ka USD1.0 dị elu kwa mita mita). Latex nkwado dị mma n'ọtụtụ ọnọdụ. Ozi ndị ọzọ gbasara ịkwado, biko gaa na post Eziokwu nke Artificial Grass Backing.